Shaqada bulshada ee 'Ghostwriter' Waxaan ku guuleystey barashada waraaqaha
, 16: 19
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah shaqada bulshada
Cilmiga bulshada ayaa ugu horeyn ka walaacsan arintaas Wada noolaanshaha dadka ee bulshada. Maaddaama aad tahay aqoonyahan cilmiga bulshada, waxaad wax ka qabataa ficilada iyo habdhaqanka aadanaha. Aad bay u badan yihiin Shaqada guriga, Darajada Bachelor iyo Muxaadarooyin macallin ah kuwaas oo ay tahay in la qoro inta lagu guda jiro koorsada. Arrin aad u adag haddii aad rabto inaad wax walba hoos dhigto hal saqaf. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga. Qorayaashayagu waxay ku caawin karaan tan. Dalbo shaqadaadii dhamaysay. Waxaan ugu geyn doonnaa waqtiga kama dambaysta ah tayo wanaagsan oo ay ku jiraan qashin-qubka. Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaad heli doontaa kugu filan inaad ku sameyso mowduucyo cilmiyaysan sida xiriirka ka dhexeeya dadka iyo meelahooda bulshada. Cilmi-baaris ku saabsan howlaha urur sidoo kale waa la falanqeeyay. Tusaalooyinka tan waa nidaamyada siyaasadeed, xarumaha waxbarashada, shirkadaha, xisbiyada, qoysaska, ururada ama xaafadaha. Imtixaanadan ayaa waqti badan qaata si ay u helaan dhibco wanaagsan imtixaannada. Qoraal-gacmeedku wuxuu ku siinayaa shaqadaada ku-meel-gaar ah, shaqo tacliimeed.
Waxaan sidoo kale ku taageeri karnaa waqtigan oo aan ku siin karnaa a shaqo xirfad leh I caawi. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Kaliya nala qaado Kontakt on, tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho at. Kadib waxaan dib kuugu soo wici doonnaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan qaadan doonaa mashruucaaga. Maadooyinka lagu baranayo cilmiga bulshada aad ayey u ballaaran yihiin. Tusaale ahaan, arday ahaan waxaad baari doontaa:
Sida kooxaha qaarkood ay ula xiriiraan midba midka kale.
Waxay abuuraan falanqeyn isbarbardhig ah si ay u muujiyaan kala duwanaanta bulshada.
Waxay aqoonsadaan horumarka iyo saamaynta nidaamyada waxbarasho ee kaladuwan ee ku saabsan guusha waxbarashada ee carruurta.
Ujeedada falanqaynta cilmiga bulshada waa in lagu sharaxo qaababka iyo nidaamyada habdhaqanka. Waxaad sidoo kale sharraxaysaa sida ay ku timid. Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaad ogaan doontaa in falanqeyntan cilmiga bulshada ay qaadanayaan waqti aad u tiro badan. Intaad wax baraneyso, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cilmi baaris badan oo xagga cilmiga ah oo laga soo qaatay ilaha suugaanta. Sidoo kale waa inaad haysataa qoraallo tacliimeed sida waraaqaha ereyga, ama shahaadadaada bachelor-ka shahaadada Masterka curiso. Tani waa in dhammaan la sameeyaa inta lagu jiro waxbarashadaada. Gaar ahaan ardayda maaddooyinka sayniska bulshada waxay u adeegsadaan caawimaad shaqo inta badan. Faa'iidooyinka tan waa kuwo iska cad.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku sameyn karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa qiyaasi karin waqti gaaban. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waxaan geynaynaa shaqadaada oo waxaan ku siinaynaa isla markiiba dalab by. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale nala soo xiriiri kartaa mid dib u xusuusasho weydii. Kadib waan ku soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay kaa caawin doonaan abuurista iyo horumarinta su'aasha shaqadaada.
Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu dhammaystiri karaa oo keliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid oo kale sayniska tacliinta inaad yeelato xirfad awooddo.
Qoraalka ghost ee shaqada bulshada
Qorayaasheena ku takhasusay cilmiga bulshada ayaa si heer sare ah ugu tababaran si cilmiyaysan dhinacyo badan oo cilmiga bulshada ah. Qorayaashayaga ghostwriters waxay mar hore abuureen waraaqo aad u tiro badan. Waad ku dhali kartaa shaqada soo socota:
Abuuritaanka su'aalo-waydiimaha ee sahaminta ee aad ugu baahan tahay qoraalkaaga bachelor-ka.
Qiimeynta iyo diyaarinta xirfadeed ee falanqaynta tirakoobka.
Diyaarinta shaqada qibrada leh
Waxaan tixgelineynaa mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna shaqsi ahaan, iyadoo ku xiran hadba hawsha gacanta lagu hayo, waxaan kugula talineynaa qoraaga cirfiidka oo sifiican ugu tababaran duurka. Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Waxaan uga jawaabnaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow. Tani waxay ku dhacdaa dhammaan waaxyaha iyo dabcan sidoo kale maadadaada sayniska. Noo soo dir codsi macaamil waxaanan kuu samayn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga. Gebi ahaanba caqli badan Waxaan kaa caawineynaa shaqada qibrada leh. Qoraal-gacmeedku wuxuu caawiyaa ardayda. Hababka xasaasiga ah si dhif ah ayey ardayda si macno leh ugu isticmaalaan, in kasta oo fahamka hababku aad muhiim ugu yahay cilmi baarista.
Shaqada bulshada ee cilmi baarista
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrad sannado badan aaggooda cilmi-baarista umana baahna inay isbartaan muddo dheer. Waad ka faa'iideysan kartaa tan. Ka dalbo warqaddaada ereyga sayniska ah annaga oo ka hel dalab aan ku xirnayn.
Rajada shaqada ee shaqada bulshada
Talo ku saabsan urur,
Horumarinta shaqaalaha ee shirkadaha,
Suuqgeynta & Xayeysiinta,
Waaxda tirakoobka ee shirkadaha, xafiisyada tifaftirka iyo joornaalada.
Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen!
Aagga shaqada bulshada ee shirkadaha ganacsiga
Inta badan ardayda qalin jabisay ka dib waxay boos ku leeyihiin xarumaha dawladda ama dhinaca waxbarashada dadka waaweyn, sida B. Xarumaha waxbarashada dadka waaweyn ama ururada shaqaalaha, oo la aqbalo.
Barashada cilmiga bulshada sidoo kale waxaa ka mid ah layliyo aad ku baran karto shaqada xirfadahaaga mustaqbalka. Kuwani waxay si cad u gudbinayaan aagagga shaqada waxaadna baran kartaa iskuna dayi kartaa hawlahaaga si dhab ah. Tababbar shaqo waxaa ka mid ah qorista warbixin tababar oo aad ku soo bandhigeyso khibradahaaga iyo cidda aad ka soo shaqeysay shaqooyinkaas. Marar badan, qorista warbixintan waxay qaadataa waqti iyo dadaal badan. Waa inaad ku soo bandhigtaa khibradaada wax ku oolka ah ee qoraalka, taas oo inta badan aan sahlaneyn. Warbixinta tababbarku inta badan waa qayb ka mid ah imtixaanka ugu dambeeya. Waxaan kuu soo bandhigeynaa inaad u qorto warbixintaada tababbarka si waafaqsan shuruudahaaga. Qorayaal khibrad leh oo khibrad leh oo khibrad leh ayaa ku qoraya warbixintaada tababbarka si tayo wanaagsan leh.
Barashada cilmiga bulshada waxay leedahay aqoon aad u tiro badan oo ay tahay in qalbiga laga barto. Kadibna waxaa jira waraaqo erey bixin ah, teknolojiyada bachelor-ka iyo teesaro heer sare ah. Tani waa mid aad u walaac badan oo si dhib leh ayaa lagu sameyn karaa waqtiga daraasadda la siiyay. Si aad ugu dhammaysato buundooyin aad u wanaagsan muddada caadiga ah ee waxbarashada, caawimaadda ayaa mararka qaarkood faa'iido leh. Waxaan ku siin karnaa tan. Kaliya nala qaado Kontakt kor ayaan kuu caawin doonaa. Tusaale ahaan, waxaad noo soo diri kartaa emayl ama waad na soo wici kartaa. Waxaad sidoo kale noo sameyn kartaa inaan dib kuugu soo wacno adiga oo lacag la'aan ah waqtiga adiga kugu habboon. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee dhanka shaqada bulshada